Saddex macalin oo ku dhaawacmay shil gaari oo ka dhacay meel u dhow Garoowe - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandSaddex macalin oo ku dhaawacmay shil gaari oo ka dhacay meel u dhow Garoowe
May 8, 2018 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Gaariga shilka galay oo noociisu ahaa Toyota Markii 2 ayaa gubtay sida ay sheegeen goobjoogayaashu. [Sawirka: Facebook]
Garoowe-(Puntland Mirror) Ugu yaraan saddex macalimiin ah ayaa ku dhaawacmay shil gaari oo ka dhacay meel u dhow magaalada Garoowe maanta oo Talaado ah, sida ciidamada nabadgelyada waddooyinka ay u sheegeen Puntland Mirror.
Dhaawaca macalimiinta ayaa la geenay isbitaalka guud ee Garoowe, sida ilo-wareed katirsan dhaqaatiirta uu u sheegay Puntland Mirror, isaga oo intaas ku daray in labo kamid ah ay ku suganyihiin xaalad caafimaad oo daran.
Macalimiinta shilka galay ayaa katirsanaa dugsiga Al-Waaxa ee magaalada Garoowe.
April 12, 2018 Saddex qof oo ku dhaawacantay shil gaari oo ka dhacay gudaha Boosaaso
May 24, 2017 Ugu yaraan afar qof oo ku dhimatay shilal baabuur oo ka dhacay wadada u dhaxaysa Garoowe iyo Boosaaso
Garoowe-(Puntland Mirror) 358 qof ayaa ku dhintay shilal gaari oo ka dhacay Puntland sanadkii 2017, sida lagu sheegay warbixin sanadeed ay Khamiistii soo saareen Taliska Qeybta Nabadgelyada Waddooyinka Puntland. Sida warbixinta lagu sheegay, 3384 shil [...]
Muqdisho-(Puntland Mirror)Madaxweynaha dowlada federaalka Soomaaliya Xasan Shiikh Maxamuud ayaa maanta oo Khamiis ah kulan sagootin ah la qaatay safiirka dalka Burundi u fadhiya Soomaaliya, Jen. Joseph Nkurunziza oo waqtigiisii safiirnimo uu dhamaaday. Madaxweyne Xasan ayaa [...]